Lena indawo ka-Satara - I-Airbnb
Lena indawo ka-Satara
Indlu yethu isendaweni ethule ezungezwe amapulazi, umfula nezinkuni. Ilungele ukuhamba ngebhayisikili nokuhamba ngezinyawo. Sinamagumbi amabili atholakalayo. Igumbi leSatara linemibhede emibili, izihlalo ezimbili, indishi kanye newodilophu enkulu phakathi. Phansi phansi kunendlu yokugezela ene-basin, ishawa yemvula kanye nendlu yangasese. Phansi kunendlu yokudlela (eTshokwane) yezivakashi. Kukhona ithuba lokusebenzisa ikhishi kanye negumbi lokuphumula futhi. Kukhona nendawo eyanele ngaphandle yokuhlala futhi uphumule.
Ngaphandle kunesikhala esanele sokuphumula nokufunda incwadi. Kukhona ithuba lokuba ne-barbeque.
Indawo esihlala kuyo izungezwe amapulazi nezinkuni. Kukhona nomfula ( de Vecht) oqhele ngekhilomitha elilodwa. Ezinyangeni zasehlobo idolobha limatasa kakhulu ngoba lizungezwe amakamu angaba ngu-15. E-Hardenberg kunezindawo zokudlela eziningana nezitolo eziningi. Ukuhamba ngezinyawo nokuhamba ngebhayisikili kwenziwa iningi labavakashi futhi ungakwazi nokugwedla emfuleni.
Sesihlale eNingizimu Afrika iminyaka engu-16 futhi sisenomndeni laphaya. Sijwayele ukuba nezivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba naseNetherlands futhi singathanda ukusebenzelana nawe.